Common Knowledge - Hangzhou DryAir Ọgwụgwọ Co., Ltd
Tụgharịa-isi kpọrọ nkụ Room System
VOC abatement usoro
NMP mgbake usoro
Arụ ọrụ Principles of Dryair Products
Ụdịdị nke Dehumidification:
The ikuku mma ka n'okpuru igirigi mgbe, na mgbe ahụ condensed mmiri a na-ewepụ.
Nke a na usoro dị irè n'okpuru ọnọdụ na igirigi ebe bụ 8 ~ 10 ℃ ma ọ bụ karịa.
2. mkpakọ dehumidification
mpikota onu na ajụkwa nke ooh ikuku ikewara mmiri.
Nke a na usoro dị irè mgbe ifufe olu bụ obere ma ọ bụghị adabara ọnọdụ nke nnukwu ifufe olu.
Lithium chloride ngwọta ịgba a na-eji banye mmiri.
Igirigi mgbe nwere ike na-ebelata ka -20 ℃ ma ọ bụ otú ahụ, ma ndị na ngwá bụ nnukwu, na absorption mmiri mmiri ga-anọchi.
4.Wheel-ụdị desiccant dehumidification
The seramiiki emep uta eri nke impregnated porous hygroscopic mmadụ na-esichara n'ime ụgbụgbọ mmanụ-dị ka ọgba ọsọ maka ventilashion.
The dehumidification Ọdịdị ya dị mfe, nke nwere ike iru -60 ℃ ma ọ bụ obere site pụrụ iche Nchikota igirigi ihe.
Nke a bụ usoro eji site Jierui.
NMP anọchi N-methyl-2-Pyrrolidone
Ebe ọ bụ na NMP elu esi ebe na ala uzuoku mgbali n'okpuru nkịtị okpomọkụ, ọ ga-adị mfe condensed site obi jụrụ n'okpuru nkịtị okpomọkụ. Dị ka usoro nke Antoine, Site n'aka ya e ji mara, mgbake nke NMP nwere ike ekenịmde obi jụrụ (bụrụhaala na mmiri mgbake ego na-ụba ma ọ bụrụ na draya iyuzucha gas nwere ihe mmiri).
Uru nke VOC ịta rotors:
1.High arụmọrụ & arụmọrụ
Iji High silica zeolites na-arụ ọrụ carbons nnukwu adsorption ike na-enye ohere anyị VOCconcentrator ka flexibly emeso iche iche iche iche nke VOCs na-arụ ọrụ n'okpuru dị iche iche na ọnọdụ nke ọrụ.
2.Capability nke n'imeso VOCs na elu mmiri ịgbọ agbọ ebe
Carbon ihe nwere a isi ike na-emeso VOCs na elu mmiri ịgbọ agbọ ebe ruru ya desorption okpomọkụ ịgba. N'ụzọ dị iche, e ji mara anyị zeolite rotors bụ incombustible na elu okpomọkụ na-eguzogide, nke na-enyere anyị VOC concentrator iji adsorption ikuku na elu okpomọkụ.
VOC mfe polymerized site okpomọkụ (eg styrene, cyclohexanone, wdg) nwere ike n'ụzọ dị irè-emeso site High-Silica zeolite.
4.Cleanability & ebighị site pụrụ iche okpomọkụ omume
Anyị zeolite rotors site calcining usoro na-na niile inorganic ihe gụnyere nyagide. Karịrị akarị n'ụlọikpe na rotor mmewere nwere ike ime mgbe a ụfọdụ oge nke use.But, echegbula !! The rotor bụ keosusu na a n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ewepụ na-akwakọba dust.It si ọbụna mma na anyị zeolite rotor nwere ike reactivated site okpomọkụ omume dị ka ọnọdụ.
Ahụkarị Ngwa nke VOC ịta rotors:
Ekwe Omume Facility / Product akara n'okpuru VOCs akara
Automotive / Parts emeputa sere ụlọ ndò Toluene, Xylene, Esters, alcohols
Steel ngwá ụlọ onye Egosipụta ụlọ ntu, oven
Nyagide / Magnetik teepu emeputa Mkpuchi usoro, nhicha unit Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, wdg
chemicals Mmanụ, chernobyl Aromatic hydrocarbons, Organic asịd, Aldehydes, alcohols
Sịntetik resin / mama Maker Plastics, Plywood n'ichepụta usoro Styrene, Aldehydes, Esters
Ọkara eduzi nhicha unit Alcohols, Ketones, Amines
Bara uru igirigi mgbe akakabarede table:
Celsius Cdp g / n'arọ Celsius Fdp gr / lb
-11 1,45 12.2 10.2
-9 1,74 15,8 12.2
Nke 2088 Keji Road Qingshan Industrial Park Linan / Hangzhou / Zhejiang Province China